Uma fan of Siwohloza, cishe ku arsenal of a screwdriver, intengo kanye nekhwalithi okuyinto weneliseka. Uma kungenjalo, khona-ke ungomunye labo abahamba ukwenza ukuhlabana. Ngaphandle leli thuluzi ngeke akwenze lapho wenza elungisa noma ngesikhathi kwakhiwa. Ukuze ukuxazulula imisebenzi yasendlini efana imishini kwakuvumelana. Nokho, kudingeka siqale main nenqubo yokukhetha, okuzoxoxwa ngezansi. Abanye abathengi ngaphambi lokuthenga lomkhiqizo ukufunda ngokucophelela ukubuyekezwa, ngoba ngezinye izikhathi bephoqeleka ukuba enze ukuthengwa kwesokudla. Uma kukhethwa yenziwa kahle, izingxenye ngokuba screwdriver ayidingekile ukuthenga phakathi naso sonke isikhathi wokusebenza.
Khetha imodeli ijubane ukujikeleza ne torque
Kubalulekile ukuba bajwayelane simo yezitolo. Ukufakwa kokumqoka kuphela ngesikhathi esifanayo kungenziwa kukhethwe esekelwe impendulo izingcweti abanolwazi. Ochwepheshe ukweluleka acabangele ijubane ukujikeleza ne torque. Umngcele we-ozonquma ukuthi kungakanani amandla enza ithuluzi lapho ushayela fasteners. Lesi sici kubonisa futhi phezu amandla ngawo umelana umthwalo imishini.
Uma ufuna ukukhetha ithuluzi ukuxazulula izinkinga zasekhaya, torque kufanele zishintshwe ku ekupha 10 kuya ku-15 Newton metres. Amabhizinisi ukhetha imishini ukuze torque kungagcini 135 Newton-amamitha. Ngenxa yalokho, inkosi yayo ukulungele ukusebenza ukudla okuqinile. Umphini motor zedivayisi ngeminithi elilodwa uzokwazi ukwenza 1,300 linemibhikisho.
Uma sikhuluma onobuhle yasekhaya, uzoba ungenza 500 ngomzuzu. Kubalulekile ukucabangela ngaphambi yezitolo isilinganiso. Ukufakwa kokumqoka kuphela, akhethwe ngesisekelo izincomo umthengi, ngeke ukuhlangabezana nazo zonke izidingo. Kuya torque ukuze kukhethwe futhi ubude iziqobosho, kanye ubukhulu bayo. Uma kuqhathaniswa nezinye ithuluzi ukufakwa kokumqoka kuphela kagesi, kuzomele unikeze ithuba ulungise torque lapho limiter isetshenziswa. Lokhu kwalokho enikeziwe indandatho elise emva chuck. Uma inkosi unqobe amandla, ngemva kwalokho nesikulufu ngeke besakwazi zifakwe odongeni, wezwa umsindo esasenza rattles. kwezithibelo okunjalo kuzovimbela ithuluzi kusukela slot ukuwohloka, ukuguga izingcezu futhi ijulile ukushumeka lwemidlalo kwamanzi.
Kukhethwa onobuhle, kuncike umthombo wamandla
Kukhona isibhamu isikulufa namathuluzi ungenantambo inikwa amandla yi-inethiwekhi. Lesi sakamuva ine mass umxhwele kodwa singazama yini ukusebenzela nabo ngaphandle kokuhamba kude zikagesi. Nayizimfundamakhwela akuncikile ibhethri ukhonza ukuthola isandiso okwengeziwe, amavidyo okuzokwenza ukucacisa uhla lokusentshenziswa ithuluzi. Amadivayisi nge amabhethri nesisindo esingaphansi, kodwa ungakwazi ukusebenza nabo isikhathi esilinganiselwe kakhulu. Abathengi abakhetha ukufakwa kokumqoka kuphela ungenantambo, zenani ukuzimela. Uma uvame ukwenza umsebenzi wokwakha emkhakheni, imodeli yebhethri kuyoba elula kakhudlwana.
Ukukhethwa imodeli yebhethri
Amakhasimende ukungena ukuze zithole induduzo akudingeki ukuba inqe amathuluzi njalo ngehora isigamu, ngempela kukhethwa amabhethri. Laba emelelwa zinhlobo ezintathu, bakhonza njengamaphayona ngowokuqala nickel-metal hydride ibhethri, owesibili zinhlobo - Lithium ion, kwathi omunye - kudivayisi NiCad.
Lapho ukukhetha ukufakwa kokumqoka kuphela nge NiMH amabhethri
Amandla ukufakwa kokumqoka kuphela zingenziwa yohlobo Ni-MH ibhethri. Ziba landile Eminyakeni yamuva, njengoba imodeli European ifakwe kubo. Ziyahlukahluka emvelweni, isisindo ongaphakeme nobungako encane. izingxenye ezisele for the ukufakwa kokumqoka kuphela ukuthenga kuzoba sesevisi, kanye nebhethri. Izinzuzo esemqoka ibhethri oshiwo ngenhla wenza akunamthelela inkumbulo, kodwa kukhona nemibi, futhi. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi amabhethri enjalo ungathandi phezu-lamanje nokuchayeka okushisa aphansi. Idivayisi, lusekelwa ngamandla ebhethri ukuthi izobiza ngaphezulu, kodwa isibalo icala Imijikelezo kulokhu 1500. Udinga ukushaja uma kunesidingo isitoreji yebhethri ende, washiya esimweni liphele akwamukeleki.
Lapho ukukhetha ukufakwa kokumqoka kuphela nge-elementi ibhethri nickel-cadmium
Uma ufuna ukukhetha ukufakwa kokumqoka kuphela ezinhle ibhethri, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ibhethri oshiwo ngenhla kuyinto anobuthi ngaphezulu, kodwa isibalo recharges ephindwa kabili kweyakhe. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe amathuluzi zisekelwe nickel-cadmium amaseli, kancane ngenyanga lolu hlobo ibhethri asesabi nhlobo. Yingakho abakwazanga kangcono izimo Russian. Kodwa lezi amabhethri zinezikhathi memory umphumela oqinile, kungaba ngokuthi nemiphumela ethile engathandeki abalulekile.
Lapho ukukhetha uhlobo ibhethri lithium-ion
Umthengi ofuna ukukhetha eliphezulu ithuluzi, pre-wokufundwayo isilinganiso. Ukufakwa kokumqoka kuphela kuleli cala uzokwazi ukuthenga ngemali ephansi kanye izici eziphawulekayo eziningi. Ngokwesibonelo, lithium-ion efakwe kule ukufakwa kokumqoka kuphela akuvamile ngakho. Ahluke ukuzwela esiphezulu amakhaza, namandla abo uphansi. Master bangathembela 3000 icala imijikelezo, inkumbulo nemphumela ibhethri elingekho. Akumangazi ukuthi imishini uzoba eziphezulu, ongenakwenziwa ihlawulelwa ngisho i isitoreji umthamo umxhwele. Self-osenyameni amabhethri cishe akunakubhubha, yingakho kulula ukuyisebenzisa ekhaya, lapho ukusebenzisa ithuluzi ngokuvamile.
Isilinganiso onobuhle ezithandwayo
Professionals kanye nayizimfundamakhwela kuba namuhla Ukhetha Makita imikhiqizo brand. Isikudilayiva nabo bayajabula. Njengoba isibonelo esihle kakhulu model bungabonakala DDF343SHE, obiza ruble 8900. Ithuluzi ifakwe chuck keyless futhi sokuprakthiza umsebenzi. Kahle bakwazi ukusebenza omunye ngesivinini ezimbili. Ngezinye imishini kokungenzi lutho can okukhipha 1300 ngomzuzu. imodeli Torque 36 Nm. Ukukhetha ukufakwa kokumqoka kuphela, intengo zazo kumele litholakale, ungakhetha inkampani Hyundai, phakathi onobuhle yayo ukunikeza A1220Li, okuyinto intengo ruble 5500. Umsebenzi kuzoba mode efanayo - boring, kodwa ngesikhathi esifanayo usebenzise esinye ngesivinini ezimbili. Isibalo esiphezulu linemibhikisho at idling speed 1,100 ngomzuzu. torque engu Maximum okulingana 28 Nm.
Inhlanganisela asezingeni elifanele kanye engambi eqolo
Ochwepheshe ukweluleka ukuba isilinganiso kuthathwe. Ukufakwa kokumqoka kuphela, elikhethiwe, kulokhu ngeke abe nezici ukuthi kudingeka. Ezimakethe imikhiqizo efanele kungatholakala imodeli Hammerflex ACD182. It kuyodingeka bakhokhe ukuze ruble 4500. Idivayisi ifakwe chuck keyless, futhi uyokwazi ukusebenza omunye izindlela ezimbili, okuyilezi, ukubhola kanye screwdriving. Inani eliphezulu linemibhikisho ngoba idling kule sensimbi 1200 ngomzuzu. Lokhu ukufakwa kokumqoka kuphela ungenantambo has a torque engu esiphezulu kule uhla 22 Nm.
Eyosiwe yenkomo ngamakhambi. isidlo esimnandi futhi flavorful
Litotes - a ezindleleni preumenshitelny
Uyazi abangababiziweyo amavolontiya?